स्मार्ट टिभी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुहोस् « News of Nepal
स्मार्ट टिभी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुहोस्
पछिल्लो समय नेपालमा पनि विश्वस्तरका अत्याधुनिक टेलिभिजन सेटहरु बजारमा आईपुगेका छन । काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै होईन पोखरा भरतपुर वुटवल बिरगंजदेखी देशका अन्य साना ठुला शहरमा यस्ता टेलिभिजनमा आर्कषक स्वरुपमा शो रुमा सजाएर राखिएका हुन्छन । एउटै स्वरुपमा धेरै प्रकारका टेलिभिजन सेटहरु राखेको देख्दा ग्राहकहरुलाई लाग्छ कुन टेलिभिजन उत्तम होला । यस्तो अन्योलताकाबीच टेलिभिजन क्रेताले नयाँ टेलिभिजन किन्दा थप बुद्धिमता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्मार्ट टिभीमा उत्कृष्ट श्रव्य–दृश्य सामग्रीको मज्जा लिन सकिने भएकाले बजारमा यस्ता टेलिभिजन सेटको माग बढ्दो छ । त्यसमा पनि चाडपर्व लक्षित गरी खरीदमा विभिन्न अफर, छूटका कारण नयाँ टीभी किन्ने लहर नै चल्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आम ग्राहककालागी केही महत्वपूर्ण र जान्नैपर्ने जानकारी बिश्वभक्त दुलालले प्रस्तुत गरेका छन । हेर्नुहोस सबैभन्दा राम्रो स्मार्ट टिभी कसरी छनौट गर्ने रु
इन्ब्युल्ट भिडियो फाइल टाइप प्रोशेसर चिप
टीभी खरीद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले प्रस्तुत गर्ने दृश्यको गुणस्तर हो । अधिकांश मानिस यही फिचरका कारण आकर्षित भई एलईडी टीभी किन्ने गर्छन् । आफूले खरीद गर्न लागेको टीभीमा इन्ब्युल्ट ९पहिले नै समावेश गरिएको० भिडियो फाइल टाइप प्रोशेसर चिपको सुविधा भएरनभएको निक्र्योल गर्नुपर्छ । यसका लागि सीधै विक्रेतासँग सोध्न सकिन्छ । ब्राण्डेड टीभीमा त्यसको फिचरका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको ब्रोसर (जानकारी पुस्तिका) को समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसबाट पनि टीभीमा रहेका विशेषताबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ । साथै, टीभी सेटको पछिल्लो भागमा रहेको प्यानलमा समेत भिडियो प्रोशेसर ट्याग हेरेर इन्ब्युल्ट भिडियो फाइल टाइप प्रोशेसर भएरनभएको स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
दृश्यको गुणस्तरपछि ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय इमेज ९तस्वीर० रिजोल्युशन हो । एचडी टीभीमा यसैको आधारमा टीभीमा प्रस्तुत हुने दृश्य कत्तिको स्पष्ट हुने थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले, उत्कृष्ट दृश्य गुणस्तरका लागि सकेसम्म करीब १ हजार ८० पिक्सेल रिजोल्युशनसहितको टीभी खरीद गर्नु राम्रो हुन्छ ।
एचडी एलईडी टीभी खरीद गर्नुपूर्व त्यसले सम्प्रेषण गर्ने आवाजको गुणस्तरबारे ध्यान दिनु पनि आवश्यक हुन्छ । अहिले बजारमा उपस्थित अधिकांश एचडी टीभीका निर्माताले ‘५।१ च्यानल डोल्बी डिजिटल साउण्ड इफेक्ट’ प्रणालीको सुविधा आफ्ना टीभीमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसले उच्च गुणस्तरको आवाज प्रस्तुत दिन्छ । एलईडी टीभीमा डोल्बी डिजिटल प्रविधिले दिने आवाजको गुणस्तर अन्यको तुलनामा राम्रो हुने निर्माता कम्पनी तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यसैले, अन्य प्रविधिका टीभीभन्दा यो प्रविधियुक्त टीभी छनोट गर्नु लाभदायक देखिन्छ ।
इनपुट आउटपुट स्लट
एचडी एलईडी टीभीमा श्रव्य तथा दृश्यका लागि एकभन्दा बढी केबल कनेक्शनको सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ । त्यसैले, आफ्ना लागि टीभीको छनोट गर्दा त्यसमा आवश्यक सबै इनपुट तथा आउटपुटका स्लटको व्यवस्था रहेकोमा निश्चित हुनुपर्छ । कसैलाई टीभीसहित होमथिएटर जडान गरी मनोरञ्जन लिने रहर हुन सक्छ । त्यसैले, होमथिएटर पुरानो होस् वा नयाँ, यसलाई टीभीमा जडान गर्न स्लटको व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ टिभी अन्नपूर्णले समाचार छापेको छ । यस्तो स्लट जाँच गर्दा डिजिटल भिडियो इण्टरफेरेन्स ९डीभीआई०, हाई डेफिनेशन मिडिया इण्टरफेरेन्स (एचडीएमआई) लगायत स्लट भए÷नभएको पनि निश्चित हुनुपर्छ । किनभने, यिनको अभावमा भिडियो गेम खेल्ने तथा ब्लू रे भिडियोलगायतको मज्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने सम्भावना हुन्छ ।
एचडी एलईडी टीभी खरीदका लागि तुलनात्मक रूपमा केही बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सर्वा्धिक वारेण्टी अवधिसहितको टीभी छनोट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । खरीद गर्न लागेको टीभीबारे आफ्ना जिज्ञासा विक्रेताका सामु राख्न हिच्किचाउनु हुन्न । विक्रेताले विक्री गर्ने क्रममा टीभीको सञ्चालन प्रक्रियाबारे दिने डेमोन्ष्ट्रेशन (प्रस्तुति वा नमूना) मा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसैको सहायतामा टीभीको छनोट तथा खरीद निर्णय गर्न सकिन्छ ।
श्वास फेर्न नसक्दा केक खाने प्रतिस्पर्धामा सहभागी एक
७३ वर्षीया वृद्धाले जन्माईन जुम्ल्याहा बच्चा
श्रीमतीकै सहमतिमा ६० वर्षीय वृद्धले गरे
छोराको विवाह गर्न पुगेका बाबु सम्धीनी
४४४ केजी तौल भएका २७ वर्षीय